Ihe kpatara na anyị hụrụ ụlọ ọrụ siri ike na-enweghị isi iyi
N'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ n'otu oge, mana otu bụ igbasa ọkụ na nke ọzọ bụ ịgbasa jụụ. Ihe ọzọ ị nwere ike ile anya bụ: ụlọ nke Lao nwere verar n'ezie, ọ na-ebugharị onye na-efe efe, na-ebugharị ọkụ, wee kpoo ikuku dị mma n'ime sofa.
A na-etinyekarị bọọdụ esc na ogwe. A na-ejikọ ụgbọ ala ndị a na-ejikọ ọnụ na ebe kwesịrị ekwesị nke egosipụtara na tebụl 1. A na-etinye batrị na-adịghị mma na akụkụ na-adịghị mma na mpaghara dị mma. Ejiri m ya.
Get ga-agwụ gị ọsọsọ n'ụsọ osimiri. Mgbe ike gwụsịrị onye ọkpụkpọ, ụdị mmerụ ahụ niile na-eme karịa. Ya mere, ndị mmadụ na-eche na ha na-emerụ ahụ nke ọma na ahịhịa ahụ. Egwuregwu ahụ agbanweela. Na football, ọ nwere ike ibugharị ngwa ngwa. Yabụ, kedu maka ọnụego mmerụ ahụ na ahịhịa? Hà dị elu karịa ahịhịa?